Lahatsoratra nataon'i Chris Lucas momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Chris Lucas
Ny torolalan'ny Marketer ho tonga Pro Flow ™ Pro Trust
Talata, Janoary 5, 2016 Alarobia 6 Janoary 2016 Chris Lucas
Ny roa taona lasa dia nitondra fanovana maro tamin'ny marketing. Nahita hetsika lehibe nankany amin'ny finday izahay, lalana vaovao hahazoana atiny mavitrika sy fanambadiana eo amin'ny fiaraha-monina sy ny varotra. Fa ny iray amin'ireo fivoaran'ny seismika indrindra dia ny habaka SEO. Tamin'ny 2013, nanambara i John Mueller fa tsy hanavao ny PageRank (Toolbar PageRank) intsony i Google, ny rafitry ny laharam-pejy momba ny laharana mifototra amin'ny sanda. Ary tsy nanao izany. Fa kosa, manana mpiambina vaovao isika
Talata, Septambra 25, 2012 Talata, Septambra 25, 2012 Chris Lucas
Ity misy zavatra tsy tadiavin'ny CIO anatiny sy ny ekipanao teknolojia anatiny hahafantaranao, ny fampiharana rindrambaiko 18 volana izay mitentina $ 500K fotsiny - $ 1MM dia mety hatao mora vidy kokoa… ary tokony. Manangana fiarovana amin'ny asa izy ireo satria ny ankamaroan'ny mpitarika sy mpivarotra haavo C dia tsy mahatakatra ny fomba fiasan'ny teknolojia sy ny tokony hiasan'izy ireo. Amin'ny maha mpivarotra antsika rehetra dia tadiavintsika ny rindrambaiko mitovy amin'ny unicorn. Ilay mitarika taranaka, famoronana atiny, isa mitarika,
Alarobia, Desambra 2, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Chris Lucas
Tsy nisy ny fanehoan-kevitra momba ilay lamba firakotra mpiaro nampiasain'ny orinasa sy ny olona ho ampinga isaky ny misy vaovao ratsy na fanaraha-maso ampahibemaso. Ao amin'ny tontolo taloha izay nandraisan'ny media ny fanambarana an-gazety ho filazantsara ary toerana nahafahan'ny orinasa nifehy ny hafatra No Comment niasa mba hividianana ilay orinasa fotoana fohy. Androany, tsy mandeha ny hevitra. Anontanio i Tiger Woods. Fitaovana media sosialy an-tserasera mamela ny olona rehetra haneho hevitra. Midika izany fa raha ianao na ny orinasanao
Tamin'ny herinandro lasa aho dia nahita ohatra tsara amin'ny fomba tena tsy manelingelina amin'ny fampiasana marketing amin'ny mailaka ho fomba iray hitarika fifamoivoizana amin'ny media sosialy. Ny mailaka dia avy amin'i Dick's Sporting Goods. Ity dia mailaka tsotra sy noforonina tsara izay nanana antso tsotra ho an'ny hetsika: Araho aminay ao amin'ny Twitter ary mahazoa kaody fihenam-bidy manokana: Maninona no tsara i Dick's nanao asa tsara tamin'ny fampiasana fitaovana nentim-paharazana, marketing amin'ny mailaka, hitarika ny fifamoivoizana
Alakamisy Oktobra Oktobra 15, 2009 Alatsinainy Oktobra 8, 2012 Chris Lucas
Imbetsaka aho no nahita lahatsoratra miresaka momba ny fomba tsy te “hifandray” amin'ny marika amin'ny media sosialy ny olona ary tsy tokony ho eo ny marikao, tokony ho olona, ​​sns, sns. Ny farany dia lahatsoratra avy amin'i Mike Seidle, bilaogera ao an-toerana ary mpandraharaha. Te-hilaza mialoha aho fa tsy fantatro i Mike ary tsy manana na inona na inona manohitra azy aho. Manaraka azy ao amin'ny Twitter aho ary heveriko fa manana ny sasany aminy amin'ny ankapobeny
Inona ny asa ilain'ny mpanjifanao ny vokatrao na serivisinao hatao?
Alarobia, Septambra 30, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Chris Lucas
Nanatrika hetsika lehibe iray aho omaly, antsoina hoe Summit Innovation, izay napetrak'i TechPoint monina any Indy. Clayton Christensen, ilay mpandahateny, mpampianatra ary mpanoratra avy ao amin'ny Oniversiten'i Harvard dia niresaka momba ny Innovation Disruptive ary nanao asa miavaka. Ny iray amin'ireo teboka nomeny tamin'ny ampahany farany amin'ny famelabelarany dia ny famaritana ny asa tokony hataon'ny mpanjifanao ny vokatrao na serivisinao. Nomeny ny ohatra iray amin'ny milkshake ary ahoana, amin'ny alàlan'ny
Ao amin'ny andraikitro atFormstack, mpanorina endrika an-tserasera, iray amin'ireo asako ny manararaotra ny fifandraisana amin'ny besinimaro (PR) ary ny fandrakofana manokana momba ny haino aman-jery, izay mitondra ny varotra ary mitarika fivarotana. Ny fananana traikefa na eo amin'ny maso ivoho na eo amin'ny lafiny mpanjifa dia azoko hoe inona no azon'ny orinasam-pifandraisana tsara ho an'ny fikambanana. Ireto misy antony telo, avy amin'ny zavatra niainako, ny antony tokony hanakaraman'ny orinasa, ary indrindra ireo orinasa madinidinika masoivoho PR ivelany. Tsy manam-potoana ianao